Ikamelo lezivakashi elizimele elinokusetshenziswa kwendawo yokubhukuda efudunyezwe yilanga - I-Airbnb
Ikamelo lezivakashi elizimele elinokusetshenziswa kwendawo yokubhukuda efudunyezwe yilanga
St Ives, New South Wales, i-Australia
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Phillip
Uzojabulela ukuhlala ekamelweni lezivakashi lethu langasese elinendawo yalo yokungena eseceleni. I-B&B yethu iyindawo engasogwini olusenyakatho olunamaqabunga. Nge-Garagal National Park esinyathelweni somnyango wethu, siseduze nohambo oluhle lwezihlahla zase-Australia, futhi kuyisikhathi esifushane nje sokuya kwamanye amabhishi amahle kakhulu asenyakatho e-Sydney. Uma ufuna ukubona lonke idolobha siseviswa kahle ibhasi le-194 futhi siseduze ne-Gordon Station nenethiwekhi yesitimela yase-Sydney.
Ikamelo lethu elikhulu lezivakashi litholakala ngemuva ezingeni eliphansi lendlu yethu futhi liza nengadi enhle nendawo yokubhukuda. Inawo wonke amasevisi ayisisekelo kanye nobulula begumbi lokugezela langasese, eliseduze. Nakuba isilingi iphansi indawo inkulu ngepulangwe phansi ngokhonkolo enamaragi amahle futhi inosofa, indawo yokudlela, umbhede omkhulu we-queen, isiphephethamoya, i-heater, i-ayina nebhodi kanye nendawo kasinki enesitoreji esikhulu. Kukhona isikhulumi se-Bluetooth esingenantambo somculo kanye ne-TV ehlakaniphile enokuxhumana kwe-inthanethi enazo zonke iziteshi zomoya kanye nokufinyelela kumasevisi okustrima anjenge-Netflix ne-Stan, kodwa kuzodingeka ube ne-akhawunti ukuze ungene ngemvume, asinayo. Sisemgwaqweni omatasa kodwa uma sesisendlini inokuthula okukhulu nezingadi ezinhle nendawo yokubhukuda enamanzi anosawoti enelanga. Zonke izivakashi kudingeka zigonywe.
Isiqandisi esiyi-Bar fridge
Indlu yethu isendaweni ethandekayo. Iklanywe ogwini olusenyakatho olunamaqabunga, yimizuzu engu-30 kuphela yokuhamba ngemoto ukusuka edolobheni, eduze nezokuthutha zomphakathi, onqenqemeni lwe-Garagal National Park, eduze kokubili ne-Lane Cove ne-King- Gai National Parks nasemgwaqeni oya e-Northen Beaches.
Kukhona uhambo oluhle kakhulu lwezihlahla eduze nendlu yethu, kuyilapho amanye amabhishi amahle kakhulu ase-Sydney (i-Narrabeen, i-Mona Vale, i-Dee Kungani) ehamba ngemizuzu engu-30 ngemoto.
Le ndlu kulula ukuyithola, ukuba semgwaqweni onomgwaqo onenani elifanele lezimoto. I-B&B isendaweni engemuva kwendlu, ibheke epaki likazwelonke futhi uzothola ukuthi ithule kahle. Inzuzo yomgwaqo we-arterial ukuthi indawo yethu kulula ukuyithola, inendawo yokupaka emgwaqweni engenamkhawulo, futhi iseduze namasevisi amaningana: Idolobhana lokuthenga i-St Ives liyindawo enkulu yokuthenga futhi yimizuzu engu-5 nje yokushayela ukusuka endlini yethu, noma ungaya ku-Chatswood noma e-Longsby, kokubili izindawo ezinkulu zokuthenga kanye nemizuzu engu-10 - 15 yokushayela imoto. Kubantu abavakashela abantu abahlala isikhathi eside esibhedlela, i-Northern Beaches Hospital ikude ngemizuzu engu-15 ngemoto e-Frenchs Forest.
My wife and I look forward to welcoming you to our guest suite!
Siyajabula ngokuthi izivakashi zishaye noma zisithumele umlayezo phakathi nokuhlala kwazo uma kudingeka.
Inombolo yepholisi: PID-STRA-27559
Hlola ezinye izinketho ezise- St Ives namaphethelo